Ubuntu Compiz | Myanmar Blog
Ubuntu ကိုဘာကြောင့် သုံးရသလဲဆိုတာတော့ သိပ်မပြောတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာအခမဲ့ရတဲ့ Compiz လေးကတော့ ဒီအောက်က ပုံတွေမှာပါတဲ့ Function ရတယ်။ သိပြီးသား လူတွေအတွက် မပါဘူးနော်။ စမ်းချင်တဲ့ လူတွေအတွက်ပါ၊ ဂျယ်လီတုံးလေးလို တုန်တုန်ပြီး ရွေ့သွားချင်လား၊ ဆွဲပြီးပစ်လိုက်လို့် အပေါ်က ဘောင်တွေထိရင် တုန်နေတာများ တစ်ကယ့် ဂျယ်လီတုန်းလေးလို နံရံကိုထိရင် ကန်ထွက်လာမှာ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတာပဲ။ Desktop မှာ မိုးစက် မိုးပေါက်လေးတွေ ကျနေစေချင်လား၊ Mouse ရွေ့တဲ့အခါ Key တစ်ခုကကနှိပ်ပြီး ရွေ့ရင် လှေနောက်ကပါတဲ့ လှိုင်းကြက်ခွပ်လေးတွေ ကြည့်ချင်လား၊ နောက်ထပ် အဲဒီလိုမျိုး Effect ပေါင်းများစွာရှိတယ်။ Compizလေး တင်ပေးလိုက်ရုံပဲ။ Free နော် လုံးဝ Free။ Linux မှာ Virus အတွက်တော့ စိတ်ချ၊ Windows က Virusတွေ အတွက်လောက်တော့ Delete တစ်ချက်ပဲဗျာ။ Shift Key တောင်သုံးစရာမလိုဘူး။ Windows မှာ Virus တွေ သောင်းပြောင်း ထွေလာ ဖြစ်နေချိန်မှာ Linux မှာ နည်းနည်းလေးရှိတာကလဲ အံသြမိပါရဲ့။
ကဲ ဒီ Function လေးတွေကိုလဲကြိုက်တယ်၊ Linux မရှိဘူးဆိုရင် Windows မှာသုံးဖို့တော့ ရှိပါတယ်။ သူ့လောက်တော့ အမျိုးပေါင်း ၃၀ ကျော် ၄၀ မရဘူး။ Desktop ၄ခုပဲရမယ်။ 3D Frame တွေလဲမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ အံစာတုံးလို လေးထောင့်တုံးလေးပဲမြင်ရမယ်။
GPL GNU OSS Linux Ubuntu Compiz
Mouse နောက်ကကပ်ပါလာတဲ့ လှိုင်းတွန့်လေးတွေ။
သူကတော့ Linux မှာ Super Key လို့ခေါ်တဲ့ Windows Key နဲ့ E နဲ့တွဲနှိပ်ရင်ပေါ်လာတဲ့ Desktop ပေါ့။ ကျပ်နေရင် Desktop တစ်ခုကနေ တစ်ခုကို ဆွဲရွေ့ ထားလို့ရတယ်။
ဆွဲဆိုတိုင်း စွတ်မဆွဲနဲ့ဗျို့ သူက ကန့်လန့်တရွတ်ဆွဲပါလာမှာ။ လွတ်ချလိုက်ရင် တုန်တုန်ရင်ရင်နဲ့ 🙂
Screen Shot ဆွဲပေးသော ကိုနိုင်အားအထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
~ by Ko Ko Ye` on August 10, 2008.
Posted in ဒိုင်ယာရီ, အကြွေး, Knowledges, Linux, Ubuntu
Tags: compiz, free, GPL, Linux, OS, Ubuntu, Virtual Desktop, XP
4 Responses to “Ubuntu Compiz”
Please tell me how to watch video files in ubuntu and how to download video code?
axa said this on	October 7, 2008 at 5:24 pm | Reply
You can use Start >> Add and Remove Software >> VLC >> Install >>
or Using APT Start >> Accessories >> Terminal >>
sudo apt-get install vlc-plugin-*
or offline installer You can see http://www.videolan.org/vlc/download-ubuntu.html from manual download
kokoye said this on	October 7, 2008 at 5:51 pm | Reply
This link is for only online install.
I want to use offline packet installer.
axa said this on	October 7, 2008 at 9:31 pm | Reply
in can Download gtz
kokoye said this on	October 9, 2008 at 10:32 pm | Reply